5 युरोप मा बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो आकर्षण | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5युरोप मा बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो आकर्षण
बच्चाहरु संग यात्रा या त एक डरलाग्दो सपना वा आफ्नो जीवन को सबै भन्दा राम्रो समय हुन सक्छ. हाम्रो साना 'मांग natures र तिनीहरूलाई Indulge हाम्रो इच्छा धन्यवाद, कुनै मध्य जमीन सामान्यतया छ. तथापि, त्यहाँ आफैलाई लागि सजिलो बच्चाहरु संग यात्रा गर्न लागि तरिकाहरू छन्. यो गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका जवानहरूले सुनिश्चित छ सधैं वा हेर्न केहि छ. तपाईंले तिनीहरूलाई कब्जा राख्न मद्दत गर्न, हामीले एउटा सूची कम्पाइल गरेका छौं5युरोप मा बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो आकर्षण. तपाईं सजिलै यी गन्तव्यहरू पुग्न सक्दैन रेल बाट. का एक नजर होस्:
इटाली बच्चाहरु को लागि आकर्षण
इटाली प्रस्ताव गर्दछ बच्चाहरु को लागी केहि शानदार आकर्षणहरु को अनुभव यदि ऐतिहासिक ठाँउहरु तिनीहरूलाई उतेजित गर्नु छैन. मा Viserba अवकाश पार्क, तिनीहरूले लघु इटाली को ठाँउहरु हेर्न सक्नुहुन्छ! पार्क पनि एक प्रमुदित-जाने-राउन्ड विशेषताहरु, खेल मैदान, विभिन्न सवारी, र एक सिनेमा. वैकल्पिक, तपाईं आफूलाई पाउन भने रोम, तपाईं जान सक्नुहुन्छ Hydromania पानी पार्क. रोम को बस बाहिर, यो स्लाइडहरू र पानी मजा एक भीड प्रतिज्ञा, जो यो बच्चाहरु को लागि उत्तम बनाउँछ.
बेलायतमा बच्चाहरु को लागि आकर्षण
बेलायतमा बच्चाहरु को लागि मुख्य आकर्षण को एक वार्नर Bros छ. स्टूडियो Harry Potter को बनाउन मा भ्रमण लन्डन. तथापि, को विचित्रताहरू मा रुचि जवान अन्वेषकहरूको लागि प्रकृति, लन्डन गरेको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ठूलो विकल्प छ. त्यहाँ बच्चा-मैत्री प्रदर्शन प्रशस्त तिनीहरूले डायनासोर र सिक्न सक्नुहुन्छ जहाँ सौर्य प्रणाली. यो एक ठूलो छ अनुभव कि लन्डन लागि भ्रमण लायक बनाउँछ परिवार.
नेदरल्यान्ड मा बच्चाहरु को लागि आकर्षण
एम्स्टर्डम सामान्यतया परिवार-मैत्री रूपमा सिफारिस गरिएको छैन गन्तव्य, तर होइन यो त्यो बाटो हुन सक्दैन. बच्चाहरुको लागि, सायद सबैभन्दा रोचक स्थान छ प्रकृति Artis Magistra या कलाकारहरू. यो एउटा एक एक्वेरियमको साथ विशाल चिडियाखाना पूरा भयो, खेल को मैदानों, जनावर संग्रहालय, र एक तारा. यो भन्दा बढी सुविधाहरू 900 पशु प्रजाति!
वैकल्पिक, तपाईं Kaatsheuvel मा Efteling टाउको सक्नुहुन्छ. यो छ सबैभन्दा ठूलो थिम पार्क देश मा, एक कल्पना विषय र मिथक र दन्त्यकथा मा एक ध्यान संग. त्यहाँ को रुचाउनु भएका बच्चाहरु को लागि धेरै सवारी र मनोरञ्जन हो दन्तिये कथा.
जब यो बच्चाहरु को लागि मनोरञ्जन गर्न आउँछ, बेल्जियम यसको विषय पार्क प्रदान गर्दछ, Plopsaland. यो रंगीन छ, रोलर coasters र खेल को मैदानों को पूर्ण, र हरेक बच्चा रमाइलो गर्न को लागि विषयवस्तुहरू विभिन्न छ. योसँग फार्म पनि छ जनावरहरू जुन बच्चाहरूले भ्रमण गर्न सक्छन्, साथै एक थिएटर र डुङ्गा सवारी.
आन्ट्वर्प डी Panne गाडिहरु गर्न
बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा प्रसिद्ध आकर्षण को एक पक्कै डिज्नील्याण्ड छ. यसलाई मा एक भन्दा कुनै पनि राम्रो प्राप्त गर्दैन पेरिस. यो एउटा कारण लागि सबैभन्दा लोकप्रिय विषय युरोप को सबै पार्क छ. त्यहाँ पाँच THEMED क्षेत्रमा छन्, साथै धेरै सवारी र आकर्षण रूपमा. तिनीहरूलाई केही Parc Asterix समावेश, क्यारेबियन को समुद्री, बज Lightyear लेजर ब्लास्ट र यो एक सानो संसारको. बच्चाहरु संग पेरिस र फ्रान्स एक यात्रा छैन बिना डिज्नील्याण्ड पूरा.
आफ्नो सम्पूर्ण परिवारका साथ एक अविस्मरणीय छुट्टी छ गर्न तयार? को केही जानुहोस्5हाम्रो सूचीबाट युरोप मा बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो आकर्षण, र तपाईं एक विस्फोट हुनेछ. बनाउन आफ्नो छुट्टी योजना निश्चित र तपाईंको रेल टिकट बुक समयमा!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-attractions-kids-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml र तपाईं / डे गर्न / pl वा / यो र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#आकर्षण #traveleurope europetrains europetravel eurotrip रेल रेल यात्रा रेल यात्रा ट्राभेलबिजियम यात्री भूमि travelfrance यात्रा travelnetherlands traveltips